Ukulawulwa kwesimo sezulu ngokuphathelene nezinkukhu- Ukushisa
Ukulawulwa Kwesimo Sezulu Ngokuphathelene Nezinkukhu-Ukushisa
Izimo zemoya zingathinta kakhulu izinkukhu kanye nempilo, ikakhulu uma izinyoni zigcinwa ezindlini. Kuhilela ukuphathwa kwamazinga okushisa, umswakama kanye nokugeleza komoya noma ukuphuza umoya.
Amazinga okushisa asekhaya aphakanyisiwe ngenkukhu azohluka kusuka kolunye uhlanga kuya kwesinye, ngezinhlobo ezithile, njengezintambo ezihamba zezinwele, ezikwazi ukubhekana nokushisa okushisa kuneminye imifula.
Amazinga okushisa asekhaya aphakanyisiwe ngenkukhu azohluka kusuka kolunye uhlanga kuya kwesinye, ngezinhlobo ezithile, njengezinkukhu ezinezintamo ezinqunu(naked necks), ezikwazi ukubhekana nokushisa okushisa kuneminye imihlobo.Ngakolunye uhlangothi, izinkukhu ezinentamo ezinqunu zisengozini kakhulu ezimeni ezibandayo, ngakho-ke kunengqondo ukukhiqiza uhlobo olulungele isimo sezulu esimweni sakho sokukhiqiza ikakhulukazi uma izinyoni zizogcinwa ngaphandle Amazinga okushisa afanelekayo okugcina izinyoni ayoxhomeka kumazinga omswakama.
Izinkukhu zokubeka amaqanda zezohwebo kufanele zigcinwe kahle emazingeni okushisa kusuka ku-20 ° C kuya ku-24 ° C. Izinyoni zidla ukudla okuningi ngomzamo wokufudumala nazo zonke i-C ° ngaphansi kwalolu hlu, ngenkathi ikhwalithi yamaqanda, ukukhiqizwa nokusetshenziswa kungathinteka kabi uma amazinga okushisa ephakama ngaphezu kwalolu hlu.Amazinga okushisa asekhaya asetshenziselwa izinkukhu zkukhiqhiza inyama ezentengiselwano ancike kakhulu eminyakeni yobudala. Njengezinkukhu ezinosuku olodwa lokuzalwa zidinga izinga lokushisa 34 ° C ukuze zikhule, emva kwalokho izinga lokushisa kunganciphisa 0.3 ° C usuku ngalunye kuze amazinga okushisa afinyelele 20 ° C ngesonto lesine.
okukulinganisa ukushisa komzimba angeke kufakwe kuphela ngamadolo aphezulu ukusuka emhlabathini ukuze kuhlole futhi kuqaphele amazinga okushisa ezindaweni ezahlukene ezinkukhuleni, kepha abalimi kufanele babuke izinkukhu zabo ukuze babone ukuthi zikhululekile yini. Izinyoni ezizwa zibandayo ziyohlangana ndawonye endaweni eyodwa ukuze zifudumele, kanti lezo ezifudumele zizosabalalisa futhi zibalekele emithonjeni yokushisa. Izinkukhu ezishisa kakhulu ziyophefuzela.
Izinhlobo ezehlukile zokushisa zingasetshenziselwa ukwandisa amazinga okushisa, ukusuka kugesi kuya kuphethiloli, ilanga kanye nepheni yogesi evuthayo.Lezi zindlela zingase zenzeke ngokuzenzekelayo noma zombhalo. Cabanga izindleko nokutholakala kwezinsiza uma unquma ngesistimu oyisebenzisayo.
Uma isifunda sokukhiqiza sibanda kakhulu, kungaba umqondo omuhle ukuba nezinkukhu zasemapulazini esezikulungele ukubeka amaqanda futhi ngenxa yalokho zingcono ekubhekaneni nokushisa okupholile, noma ukuhlela ukukhiqizwa ukuze kugweme ukutholakala unezinyoni kule ndawo phakathi nalezi zikhathi.
Uma izakhiwo ezivulekile zisetshenziswa, amafasitela angavalwa ngamakhethini ukugcina isakhiwo sishisa.
izikhala zomoya kufanele zisetshenziselwe ukusabalalisa kokushisa yonke indlu
Ukusatshalaliswa okuncane kokushisa kungaholela ezinye izinyoni zikhule ngokushesha kunabanye futhi kuzobangela izinyoni zibukeke zihlukile.
Indawo yokukhiqiza ingancishiswa ngokuhlukanisa indawo yokukhiqiza ngekhethini lapho izinyoni zincane.
Izakhiwo kufanele zifudumele futhi zifakwe uphawu ukuze kuvinjelwe umoya obandayo
Ukucindezeleka OkushisayoKuthinta Izinyathelo Zokukhula Kwezinyoni
I-Farmer's Weekly ineziphakamiso ezilandelayo zokubhekana nokucindezeleka kokushisa kwezinyoni:
Ukupholisa kufanele kukhuliswe ukuhambisa umoya oshisayo kude namapuphu. Lokhu kungenziwa ngokuvula amakhethini ezindlini ezivulekile noma ngokusebenzisa umoya ophuthumayo.
Uma kuzinkukhu ezifuyelwa phandle, kufanele zifinyelele emthunzini.
Izinkukhu kufanele zibe nokufinyelela kwamanzi okuphuza abandayo. Ngeke ziphuze amanzi uma efudumele
Ukudla kungasuswa ngesikhathi sezinsuku ezishisayo futhi kunikezwe ngezikhathi ezipholile.
Amapelisi kanye nemvuthuluka zifanele zinikezwe izinyoni esikhundleni senqwaba yokudla ukuze kunciphise ukuchitha amandla.
amaminerali namavithamini kufanele afakwe ekudleni ukufaka esikhundleni sokulahlekelwa okubangelwa ukuphelelwa amandla kwamanzi nokuphefumula.
Ukuphatha izinyoni kufanele kunqunywe isikhathi phakathi nosuku lapho izinga lokushisa liphakeme kakhulu.Inani lezinyoni lingancishiswa